वैशाखको पहिल्यै दिन थिएँ म रोसी तीरमा !
विचित्र हुन्छ कहिलेकााही । यदाकदा नसोचेकै कुराको जोरजाम हुन्छ । हठात्मा घुमन्ते भइन्छ, जोहो न सोहो । मेलोमेसोविनै डुलन्ते हुन पुगिन्छ । अपुताली लाभ भनेकै यै होला-अचम्मैले घुमघाम गर्न पुगिन्छ ।
हो, २०६८ सालको पहिलो दिन रोसी किनारमा थिएँ म ।
वर्षौं नभेटिएका मित्र पदमराज जोशीले एकाबिहानै खबर गरे, आज भकुन्डेबेसीबाट तल ओर्लनै पर्छ ।
धेरै अघिदेखि त्यतातिर जान पाए हुन्थ्यो भनेर मनले बुरुकबुरुक गरिरहेको बेलामा जोशीको खबरले खरबारीमा आगो लाएजस्तो भइहाल्यो । सोचीसम्झनतिर समय लगाइना । घरायसी झ्याउलातिर अल्मलिना ।
अनि म कुम्लो बोकेर झटारिएथें त्यता ।
दिउँसोको मधुरो घाम, चिसो सिर्सिर । पातलो तुावालो फैलेको थियो फााटभरि । भर्खरै बनिरहेको र बेतोडले हुर्दुराइरहेको बाटो दगुरिरहेथ्यो बर्दिबास पुग्न । त्यस वरपरका हुनसम्म चर्केर किनबेच भएका जग्गामा उभिइरहेका मान्छेका उदास अनुहार भेटिन्थे खुबैखुबै । कुन बेलाका घुन, यो बेला भइरहेथे नम्बरी सुन-यी बारीका पाटा ।
पुग्नु थियो कात्तिकेमुनिको मङ्गलटार ।
'बिस्तारै जाऔं । घुमीघुमी पुगौं !'
मैले भनेँ ।
हतारिएर पुग्दा खुट्टा मात्र पुग्लान्, पुग्दैन मन त । मनले नटेकेको ठाउँ, के ठाउँ ! के पुगाइ, के बुझाइ ! के हेराइ, के देखाइ !
'कुनै समय दशौा जनालाई जङ्गली तन्नेरीका तुजुगले एकै चिहान पारेथे !'
हामीसागै चिया सुर्काइरहेका केदार आचार्यले सुनाए द्वन्द्वका पीरा कथा । उनीसँग घर व्यवहारका कुरा भए धेरैधेरै ।
बन्दुकका चेपुवामा परेका अरु निकै धुकधुकी थिए त्यहाँ ।
'आँगनमा सुकाएका बदाम खाादा भाउजूले वचन लाइथिन् । त्यै बेलादेखि मैले इख लिएँ र अगाडि बढेा !'
एक माउको दूधबाट व्यवसाय सुरु गरेर अहिले करोडौाको धन यसमै आर्जन गरिरहेका आचार्यले भने-'दुःख अहिले नि छ । त्यो बेला, अंश पाइयो सगोलको घर । भाग पर्‍यो ठूलो खाड्कुलो । अब त्यसमा कसरी पकाउनु, लोग्नेस्वास्नीलाई मात्र ?'
कहालिलाग्दो जीवनका खुइयय सुनिरहेछु ।
अनि हामी सडकसामु ठडिएका उनका घर हेर्दै ओर्‍हालो लागेथ्यौा ।
खुल्ला आकाशमुनि रमाइरहेथ्यो भकुन्डेबेसी । वीपी राजमार्ग हुइाकिरहेथ्यो रोसी भेट्न तलतल । फााट, खोँच, खरिखुन्नै डाँडाहरु र चारै दिशा ठडिएका थुम्काहरुले मन तानिरहेथे, आँखा लोभिइरहेथे र खुट्टा जमजमाइरहेथे ।
चौकीडाँडा, कटुन्जेपछि थकाइ मार्‍यौा लासकोटमा ।
भेट भयो रोसीसँग । कल्कलाइरहेको रोसी खोला सङ्लो पानी वरिपरिका थुम्कामा थिए गहुँका लहलह । गरैपिच्छेका बालीले बुट्टैबुट्टा सजाउँथे, चित्रजस्ता । हरियो देखेर मनै भयो हरियो ।
सडकछेउ भेटिएका सार्कीमान तामाङसँग केही शब्दका अर्थ सिकेा मैले ।
'मामा अर्थात् आस्याङ । माइजू अर्थात् आङी । म्हेन्दो भनेको फूल । रो भनेको साथी ।'
सार्कीमानले सिकाएका अरु शब्द टिप्न सकिना ।
रोसीको कलकलले सङ्लियो मन । साना, रहरलाग्दा छाल थिए रोसीभरि । कञ्चन खोलो पहाडी पिाध भएर तराईतिर वेगवान् थियो एकोहोरो ।
खोलामा सङ्लो पानी थियो । त्यो सङ्लोले छेउछाउमा उमारेछ हरियोपरियो । पानीको रसिलो र मलिलो तह देखियो मज्जाले ।
चारसेफााट नााघेर पुग्यौा गिम्दी ।
दुबैतिर थिए एकोहोरो उराठलाग्दा डाँडाहरु । पातला बस्ती परेलीसँग ठोक्किएर बेपत्तिन्थे । डाँडा र चेपको चुम्बन थियो निकै चर्को । आकाशको गिज्ज्याइजस्तो, धर्तीको लोप्पा खुवाइजस्तो-वरपरका थुम्कामा एक बुट्यान देखिन्न्थ्यो । कुनै बिरुवाको एकथोपा छाायासम्म सल्बलाएको थिएन । अाह, थिएन ।
मास्तिरको नीलो आकाशको सुन्दरताले तान्थ्यो मन पटकपटक । नीलाम्मे सगरको भित्री दहमा मन त छप्लाङछुप्लुङ ।
'पहिलापहिला यो ठाउँले खुबै बदनामी कमाएथ्यो ।'
'साहूले आसामीसँग रिन तिर्न भन्दा-पख न, छोराले रोसी कुरेर लुक्न सकोस् भन्थे रे !'
'ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली, धनकुटा, सोलुखुम्बु जाने पुरानो बाटो यै हो । अनि लुटमार खुबै हुन्थ्यो रे यता ।'
'अनि लुटेराहरु लैनो कि बर्केनो भन्थे रे !'
'ए, ए !'
'लुकेर बसेकाहरुले लैनो-लैनो भनेपछि ढुकेर बसेकाले लुट्थे रे !'
पुराना हैरानीका कुरा सुन्दै त्यै बाटो गइरहेछौं हामी ।
नार्के पुगिएछ ।
घामले दिनभरि फैलाएका पखेटा खुम्चाएछ सरक्क । खोँचमा थुपि्रएको अाध्यारो बामे सर्दै बाहिरिन थाल्यो सुस्तरी......सुस्तरी ।
मैले वरिपरिका सुक्खा डाँडाहरु हेरेा ।
'यतिखेर क्यै नभए नि अलिकपछि सत्ती बयरका घारी उमि्रन्छन् यी पाखामा !'
सार्कीमानले अघि भनेको सम्झेा ।
तलबाट अथाह पहाडी नदी मिसिएर निकै रसमय र ऊर्जामय भएर गइरहेछ रोसी । कुलुकुलु बगिरहेका त्यसका किनारमा लहलह हरिया चारपााच पाते मकैले सिागारिएको छ धर्ती ।
'उभिएर, यो हरियाली आँखालाई पिउन दिने कि ?'
'भइहाल्छ नि !'
मेरो प्रस्ताव माने जोशीले ।
हामी पिन्थलीदेखि चिउरीबाससम्म लम्क्यौा बिस्तारै । बेलुका ज्यान बिसाउन मात्र पुग्नु थियो । क्यै थिएन अरु बित्तो ।
बाटबाटामा रुखका बुट्यान, ढिस्काढिस्की, ढुङ्गाका थुप्रामा युवायुवतीका जोडी देखिन्थे निकै । वनपाखा सुक्खा भएर के भो, तिनका हृदय फुलेका थिए लछप्रै । भीरकान्ला उराठ भएर के भो, तिनका मन मगमगिएका थिए हुनसम्म । खोँच र थुम्का सुनसान भएर के भो, तिनका आँखामा भरिभराउ थियो जीवनको महक ।
चिउरीबासमा भेटिए कामीसिङ ।
उनी आफ्ना 'रो' हरुसँग भन्दै थिए-'छोराहरुलाई सम्झाएर आएको बेासीबाट । अर्काको खेतमा धान हरियो हुँदा आफ्नोपनि खेत हरियै हुनुपर्छ । अर्काको घरमा गाई हुँदा आफ्नोघरमा पनि घिउ नटुटेकै जाती । यो त गाउँको परम्परा हो । यो थिती रहिरहे, दुःख हुँदैन । यो विधि नमान्दा दुःखले घर घेर्छ !'
ठूलो शिक्षा थियो मेरा लागि पनि यो ।
झमक्क सांझमा पुग्यौं मङ्गलटार ।
म वरपर ठडिएर बसेका डाँडाहरुसँग भोलिको उज्यालोमा बातचित मार्न पसारिएँ छिट्टै । चिसोचिसो रात थियो । वरिपरिका डाँडा र खोँचमा अनेक खालका चराले फन्को मार्थे, आवाज उराल्थे र पखेटा फटफटाउँथे ।
रातभरि सुसाइरह्यो रोसी । उसको अविराम स्वाँऽऽऽ ले मन सबै धोइयो मेरो । उसको कलकलले मेरा छातीमा थिगि्रएका फोहोर बगायो । उसको सङ्गीतले मेरा कानमा थुपि्रएका कसरमसर बढारेर लग्यो सिनित्तै ।
उत्ताउली छैन रोसी । नखर्माउली छैन रोसी । र्झकलीर्फकली बानी चैा उसमा छ रे धेरथोर !
आवाजको उपचार गरेा मैले । सांझ, मध्य रात, झिसमिसे बिहान, मध्य दिन-सबै खाले समयमा रोसी हेरेा, पढेा र उसका गतिपति निहालेा । परिवर्तन, दर्शन र ज्ञानका तहतहमा उभ्याउन सकेा आफूलाई ।
दुई गते बिहानै हामी उक्लियौा कात्तिकेतिर । बाटामा मङ्गल जनविजय उच्च माध्यमिक विद्यालयको चकमन्न चौर थियो । खहरे खोलाले जताततै बनाएका बाटा, बगर र बालुवाका रास नाघी पसिना बगायौङ हामीले ।
घामले वरपरका चुलीहरु मनोयोगले पुछपाछ गरिरहेथ्यो । गहुँ फलिरहेका तरेली खेतमा देखिन्थ्यो रङको नौलो थपथाप । उत्तरभन्दा दक्षिणतिरका डाँडाहरु देखिन्थे केही हरियापरिया । परपरका बस्तीमा देखिन्थ्यो जीवनको सिलिङबिलिङ ।
मैले पारिको कालधारा डाँडा हेर्दै सोधेा-'यताको जिन्दगी के कस्तो छ ?'
'अभाव बढ्ता छ, राजनीति सबभन्दा सम्पन्न छ !'
'शिक्षा बामे सर्दै छ । विकाश मरणासन्न छ !'
थुम्काथुम्कामा केही छरछार भएका बस्तीको गरीबी र दुखाइ आउँछन् मेरा आँखासम्म । तिनका चोट पढ्न खोजिरहेको छु म ।
अघि बाटामा तेल पिाध्न गएकी तामाङ्नीलाई मैले सोधेथें-'आङी, कतिखेर घर फिर्नु हुन्छ?'
'आधा दिन जान, आधा दिन आउँन !'
'अनि यो तोरी बेची तेल किने हुन्न र ?'
'हामी खाट्टी खान्छम्, खाट्टी बाच्छम् सार !'
उसले 'सर' लाई सार भनेकी थिई ।
यतातिर तामाङहरुको बसोबास छ बढ्ता । यो सरल र हार्दिक जातिलाई राजनीतिका पुङमाङे कुराले खुब रगत तताएको रै'छ आजभोलि । गाउँका सरस �ओठमा पनि घोकाइएका र जबरजस्ती लादिएका शब्दले राम्रै ठाउँ पाएको बेस्सरी पाइरहेको थिएँ म । निकै खल्बलिएछ समाज त ।
उकालो, तर्पे र समथर भएर पुगियो-थाक्ले पाखो । सिलिङबिलिङ रुखपातले वन मन्त्रालय, वन मन्त्री, वन रक्षक र वनजङ्गललाई पारिरहेथे उल्लीबिल्ली । एकाध चिउरी, जामुन र काफलका झ्याम्म रुखले तिनको इज्जत जोगाइरहेथे । नत्र पुरै डाँडो थियो, ठुटैठुटाले भरिभराउ ।
अघिल्लो दिन सांझमा भुवन थापा मगरसँग जिन्दगीका निकै आँत खोलियो । तीन दशकभन्दा बढी समय दुनियाँलाई पढाएर पनि आफ्नोजीवनबारे पढ्न नसकेका थापाले भनेथे-'घुाडे चुली, भुमे चुली, थाप्ले चुली, कलोन चुली, बजरदेउ चुली यताका विख्यात चुली परे ।'
'यी चुली छेउछाउको जनजीवन, कृषि, व्यवसाय र संस्कृति विचित्र-विचित्रको छ !'
उनले तीसवर्षदेखि पढ्न नसकेको सभ्यतालाई बाह्र चौध घन्टामा म कसरी पढूँला !
उकालैमा थियो विन्ध्यावासिनी प्राथमिक विध्यालय । चौरमा केही कराँते, जुडो खेलिरहेका तरुनातरुनी इाटा, ढुङ्गा फोर्दै जवानी बलियो पारिरहेका थिए । उता तल रोसी तीरका बस्तीमा हाँसो व्यायाम गरेर सिङ्गै बिहान पारिरहेथे खलबल । जेहोस्, तन र मन सबै स्वस्थ पार्न जुटिरहेथे । गाउँमा नयाँ गतिशीलता भेटेँ मैले ।
दिनभरि वरपर डुल्दै बिताइयो ।
काल्ढुङ्गाबाट आएका एक हुल युवती पात टिपेर डोका थाप्लामा लिई आइरहेथे-'ए म्हेन्दो, कसका लागि यो पात ?'
'साथीको बिहेका लागि टपरी चाहियो नि ! पात लिएर आ'का !'
'आफ्ना लागि पो खोज्नुपर्ने ?'
'तपैालाई थाहा रै'न छ । आफ्ना लागि अर्काले गर्छन्, अर्काका लागि आफूले गर्नुपर्छ नि !'
'हो र ?'
'लोग्ने चाहियो भनेर आइमाईले निधारमा लेखेर हिाडेको देखेको छ, सार ?'
'त्यो त छैन !'
'बाआमाले त्यो बुझेर खोजिदिन्छन् !'
हल्लहल्ल हाँस्तै ती उक्लिए वाल्टिङतिर । गाउँबाट आएका ती सरल युवतीमा कुनै बनिबनाउ जीवन छैन । छ त हार्दिकता छ, सरसता छ, निष्कपटता छ । कात्तिकेमुनिको हाँसोले वरपरका चुली फड्किए ।
सांझमा फेरि बरालिएँ रोसीछेउका खेततिर ।
भोलिपल्ट लाक्पाल गाउँतिर एकाबिहानै उक्ल्यौा पदमराज र म । ढुङ्गेनी उकालोले पसिनै छुटायो । पूर्वतिर वेगिइरहेको रोसीको सुन्दरता टाँसिन्थ्यो आँखामा । उत्तरतिरका बाँदर चिप्लिने भीर थिए । तिनै भीरमा नि मान्छेका घर हजारौं वर्षदेखि रहिरहेकै देखिन्थे । सयौँ वर्षदेखि जीवनले दाँती र मुङ्ग्री गरिरहेथ्यो यो आपट्टे भीरमा ।
टुप्पोमा बनेका झुप्राको शान कति हो कति !
मैले गुम्बाछेउ फिरफिराइरहेका कपडाका ध्वजा हेर्दै भनेँ-'आम्दानी त खेतीपाती मात्रै होला है, यताको ?'
'हो, आकाशे खेती !'
'अझ, अल्छीले घर गरेको छ यता । धेरै बस्तीमा सँग रोपिन्न, फलफूल भेटिन्न !'
'कोदो, फापर, राजमा, बोडी उमार्‍यो । आलु उमार्न चैा बिर्सदैानन् । हो, गाईबस्तु भने मज्जाले पाल्छन् !'
यी सबै बेहोरा सुनाए मित्रले ।
मैले गरीबी, दुःख, अभाव र समस्याले बेस्सरी पैताला फुटाएका अनुहार एक पटक उभ्याए मनमा । देशभरि धेरै ठाउँमा ती ��"ठ र परेली थिए नै । अहिले झन् खिइएका र पुर्लुक्क ढल्न आँटेका ज्यानका लस्कर देखिए ।
तामाङहरु 'वाला' भन्दा रहेछन् युवा, तन्नेरीलाई । केटाहरु जसलाई पनि डाक्नुपर्दा भनिहाल्थे, वाला । मलाई मीठो लाग्यो सम्बोधन ।
एउटा किशोर झोलामा भेला पार्दै थियो सालको चोप ।
'यसको के काम, वाला ?'
मैले सोधेा ।
'धामीले भन्या, यसको धुप हाले मेरी स्वास्नीले बच्चा सजिलै पाउँछे रे !'
उसले मतिर हेर्दै नहेरी भन्यो ।
लौ, अन्धविश्वासको योभन्दा अन्तिम उदाहरण के हुन सक्छ ? देशले शिक्षामा लगाएको करोडौाको रकमको उपहास थियो यो । देशले चेतनामा लगाएको अर्बौं रकमको हाँसो थियो । देशले सूचनामा लगाएको खरबौं रकमको गिल्ला थियो यो ।
जिउँका तिउँ थियो अज्ञानता यो पाखामा ।
थाक्ले थुम्काबाट मास्तिर हेर्दा देखिन्थे छाप र वाल्टिङ ।
थापाले भनेकै सम्झेा मैले-'मङ्गलटार, छाप र वाल्टिङका घरानियाँले चल्यो । अहिले यी आफ्नै गोठका गोरुले हानेर ढलेका हलीजस्ता भएका छन् ।'
समयलाई नचिन्नुको पीडा रोसी वरपर पनि रै'छ । मैले यसरी नै बुझेँ ।
'आस्याङ, खेत खन्दै ?'
गुम्बा तलका एक बूढालाई मैले सोधेँ ।
'के फल्छ र ? माटाका डल्ला चिम्टोदै, खाँदै !'
नैराश्य बोले तिनले ।
पानी नभएर खेत, पाखा र गरा थिए उराठलाग्दा । काम गर्ने तरुनीहरु सहर पसेथे । पाखुरा बजार्ने तरुनाहरु विदेश लर्किसकेथे । बस्तीमा थिए त ससाना केटाकेटी र ��"छ्यान परेका बूढीहरु । अनि काल कुरेका बूढाहरु ।
मैले रोसीको सुन्दरता निकै निहालेँ ।
सुनकोसी र रोसीको माझमा अभिशप्त जीवन बाँचिरहेको तिमाल थुम्का पनि हेरेँ । सँधैको काकाकुल जीवन बाँच्न सकिन्छ कसरी ? तिमाल डाँडामा पानीका लागि घन्टौँ समय खर्चने आइमाईहरु पनि भेटे ।
आँखाका परेली समेत सेतै फुलेकी एउटी वृद्घाले सिलाबरे गाग्री किन्दै गरेकी थिइन् ।
उनले आफ्नोखड्कुलो मासेर दुईवटा गाग्री किन्दै बोलेको सुनेँ-'यो थोत्री नसक्दै, अर्को मास्ने सम्पत्ति खोजिहाल्नु पर्छ !'
कुरो रहेछ यस्तो-
पानीको धेरै दुःख हुने तिमालमा चाँडचाँडै कुँच्चिदा रहेछन् । अनि आफ्ना गोडधुवाका सामान मास्दै आइमाईहरुले खरिद गर्दा रहेछन् गाग्री । यी वृद्घासँग सबै सिद्धियो रे-माइतीले दिएका गोडधुवाका सामानहरु !
दुई दिनभरि रोसीवरपर घुमेँ म ।
आधा कमेरो र आधा रातमाटेले लिपेर सजाइएका घर हेर्दै मनको घर हेर्दै मनको चकमन्नता भत्काउँथें म । घर अगिल्तिरका आँगनमा भएका मकैका सुली हेर्दै आँखामा सन्तोष भर्थें म ।
रोसीको कलकल कुदिरहेथ्यो, वेगिइरहेथ्यो, हेलिइरहेथ्यो ।
किन यी डाँडाहरुमा रुख नरोपिएको होला ? किन नाङ्गा डाँडालाई हामी मृत्योन्मुख बनाइरहेछौं ? किन यी पाखाहरु झन् उराठलाग्दा बनाइरहेछौँ ? मैले अरुसँग सोध्ने साहस गरिनँ । केवल प्रश्न थियो आँफैमा ।
घामले आफ्नोशक्ति लगाएर यी डाँडाहरुका चट्टान बालुवा बनाइरहेथ्यो, बालुवालाई पर-पर उडाइरहेथ्यो अनि जीवनमा सङ्कटको रातो बत्ती बलिरहेथ्यो । धुलिसात्.......धुलाम्मे.......धुलो.......हुँदै थियो जीवन !
एक बिहान कात्तिकेमुनि चिया खान बसियो ।
'चिया खाउँ है त !'
निकै बेरसम्म चिया आएन । एकदमै कडा खार आयो, खुर्सानी भुटेको । आँखा पोले । नाक रसाए । धावा बोल्यो पटकपटक हाच्छ्युँले ।
'चिया भुटेको हो कि, रो ?'
एकजना तामाङ बूढाले भने ।
पसल्नीले थामथुम पारिन्-'त्यत्तिकै खाको चिया, के चिया !'
उनले खाना र चिया एकसाथ पकाउन थालेको देखियो ।
हाँसो पोखियो बेस्सरी । गाउँको हाँसोमा त्यति धेरै राजनीतिको भाला, खुाडा र तरबार भित्रिइसकेको थिएन ।
मैले अघिल्लै दिन कात्तिकेको थुम्कोबाट सिन्धुली, काभ्रे र रामेछापका अरु गाउँ निहालेको थिएँ । एकलासका ती गाउँमा अल्मलिएको धमिलो खुशी देखिन्थ्यो कताकति !
इतिहास, समय र देशमा यी ठाउँले आफूलाई उभ्याएका छन् कतैकतै । धर्तीका यी फग्लेटाले नेपाली मनका कुनै कुनाकाप्चामा आफूलाई दगुराएका छन् । शासनका कुनै आवाजमा आफूलाई टेकाएका छन् यी ठाउँहरुले ।
म फेरि रोसीका कलकलमा मन धुन्छु ।
एकोहोरो सुलुलु गइरहेथ्यो राजमार्ग । एकनासले बगिरहेथ्यो रोसीको रसिलो पानी । हावा, पानी, घाम र खेतको चिनाजानी हो पुरानो । यी एकालाप भएर बटारिएका देखिन्थे रोसीका किनारमा ।
कलकल नदी । चकमन्न डाँडाहरु । चुपचाप खेतहरु । ठिङ्ग रुखपात । शान्त आकाश । बिघ्न बिनाका दुई रात । अशान्त मन थिए रोसी किनारका । मान्छेका मन थिए शान्त ।
तीन दिन बसेर चौथो दिनको मध्यान्हमा बिदा भएँ म मङ्गलटारबाट । झोलाभरि राजमा बोडी कोचेर जोशीले भनेका थिए-'तपाईंको मन त अघायो होला, घरका साना नानीहरु त त्यो मनबाट सन्तुष्ट हुँदैनन् नि !'
हो, मलाई तिनले राम्रै पढेको मानेँ ।
मेरा छातीभरि पहाडी रोसी उत्ताउलिएर छङछ ङाइरहेथ्यो, सल्बलाइरहेथ्यो र गडगडाइरहेथ्यो । छालमा धोइएको मन बोकेर फर्किएँ म ।
रोसी बगिरहेछ मेरो नसाभरि !